Iza No Ao Ambadiky Ny Fahombiazan’ny Media Mpanesoeso Ao Hong Kong? · Global Voices teny Malagasy
Iza No Ao Ambadiky Ny Fahombiazan'ny Media Mpanesoeso Ao Hong Kong?
Voadika ny 13 Aogositra 2017 3:38 GMT
Pikantsary tamin'ny fandaharana vaovao manesoeso telo minitra tao amin'ny MostTV.
Nandritra ny taona maro, niady mba hampitombo ny tombombarotra amin'ny vanim-potoana nomerika ny indostrian'ny haino aman-jery ao Hong Kong ary hihazona ny fahamendrehana amin'ny famoahana lahatsoratra amin'ny fotoana izay mihasarotra hatrany ny fanehoan-kevitra malalaka. Raha ny marina, vitsy dia vitsy ny tranga momba ireo orinasa mahazatra izay nahomby tamin'ny maodely fihariana nomerika voalohany ary iray amin'ireo tranga tsy fahita firy ny fangatahana fidirana amin'ny tsenam-bolaan'ny fampahalalam-baovao mpanesoeso 100 Most.
Tamin'ny 26 jolay, nametraka antontan-taratasy tany amin'ny Hong Kong Stock Exchange ny Most Kwai Chung Limited, mpandraharaha amin'ny fampahalalam-baovao malaza ho mahatsikaiky TVMost, fampahalalam-baovao an-tserasera iray, sy ny 100Most, gazetiboky Shinoa manana fampahalalam-baovao Facebook ahitana mpanjohy maherin'ny 1,1 tapitrisa.
Nampiseho ny fangatahana fidirana amin'ny tsenambola fa teo anelanelan'ny 1 Aprily 2016 sy 31 Martsa 2017, nahazo fidiram-bola 95 tapitrisa dolara Hong Kong (eo ho eo amin'ny 2,1 tapitrisa dolara amerikana) ny orinasa – avy amin'ny dokambarotra amin'ny media nomerika ny ankamaroany – ka nahazoana tombombarotra tsy afa-karatsaka 58 tapitrisa dolara Hong Kong (eo ho eo amin'ny 1,4 tapitrisa dolara Amerikana). Maneho fitomboana 74 isanjato tamin'ny vola miditra taona 2015-2016 izany.
Tanora telo, Roy Tsui, Chan Keung sy Bu no nanangana ny orinasa tamin'ny Janoary 2010 miaraka amin'ny vola fanombohana latsaky ny 1000 dolara.
Na dia miompana amin'ny famokarana dokambarotra aza ny orinasa fampahalalam-baovao, dia nahangona votoaty malaza antserasera izay maneso ny raharaha ankehitriny miaraka amin'ny mpomba ny demaokrasia na politika mitongilan'ny “mpifikitra hiringiriny amin'ny ao an-toerana” (manondro ny hetsika mampiroborobo ny soatoavina sy kolontsaina eo an-toerana mihoatra noho ireo ao amin'ny Shina tanibe). Raha ny marina, ny anarana Shinoa an'ireo fampahalalam-baovao roa dia, “Most” na “Mou Gei” (毛 記), hala tahaka manesoeso tamin'ny anaran'ny fahitalavitra mahazatra ao an-tanàna Television Broadcast (TVB) na “Mou Sin” amin'ny teny Kantaoney. Maro tamin'ireo fandaharany malaza, toy ny vaovao manesoeso telo minitra isan'andro, no nalaina tahaka (mba hampihomehy) tamin'ny fandaharan'ny TVB.
Niteraka adihevitra antserasera ny fahombiazan'ny TVMost sy 100Most. Nilaza ny sasany tamin'ireo mpiserasera fa tokony hanatsoaka lesona amin'ny maodely fandraharahan'ny Most ireo tranonkalan-gazety hafa hahombiazana eo amin'ny tsena. Na izany aza, ny hafa indray mahita azy ireo ho sehatry ny votoaty ambony kalitao ary manahy fa mety hanakana ny sehatra asa fanaovan-gazety matotra ny fitantanana fialam-boly sy vaovao ao amin'ilay votoaty malaza antserasera.
Nikarakara adihevitra an-tserasera momba ny maodely fandraharahan'ny Most amin'ny fampahalalam-baovao ny sehatry ny asa fanaovan-gazety mpanao fanadihadiana, Initium. Ity ambany ity ny iray tamin'ireo fanehoan-kevitra.
@Lamwaai nanohana ny paikadim-baovao manesoeso an'ny Most100:
Mino aho fa fampahalalam-baovao tanora sy mahatsikaiky ny Most100. Nanome ho an'ireo tanora izay iharan'ny fanerena be mba hampihatra izany eo amin'ny fiainana miaraka amin'ny (sehatra asa) vaovao azo atao izany.
@sixstrings koa nankasitraka ny Most100 ary nanazava ny tontolon'ny sosialy sy politika momba ny fahombiazany:
Misy fiaviany avy ao an-toerana ny kolontsaina fanaratsiana sy ny hala tahaka ara-politika. Nanana traikefa tamin'ny fiasàna tao amin'ny fahitalavitra Hong Kong sy ny Radio Broadcast [fampielezam-peo Hong Kong vatsian'ny governemanta ara-bola] tamin'ny famokarana parôdia ireo mpamorona telo, angamba nanatsara ny paikadin'izy ireo malaza izy ireo hidirana amin'ny fandraharahana ankehitriny ary hisarika mpihaino.
Tsy mihevitra aho fa nitarika adihevitra ho an'ny daholobe ny Most100, na farafaharatsiny toa tsy manana fikasana hanao izany. Ao anatin'ny fialamboly ara-politika fotsiny izy. Angamba aza tsy niandrandra fahombiazana tahaka izany ireo mpanorina. Ny antony mahatonga ny parodian'ny Most100 ho malaza dia mifandraika amin'ny zava-misy fa tsy afaka manova ny fiarahamonina ny olona ary noho izany, mankafy vaovao manesoeso no azon'izy ireo natao.
@Mr Kwan indray nahita ny voka-dratsy naterak'ireo vaovao manesoeson'ny Most100 teo amin'ny asa fanaovan-gazety matotra:
Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny aterineto sy ny fifandraisana amin'ny finday isika ankehitriny, mihevitra ny olona fa tokony maimaim-poana ny votoaty ary tsy tokony hampandoavina vola (tsy toy ny gazety mahazatra). Na izany aza, rehefa mahita votoaty tsy misy fahalalahana izy ireo, dia mitady vahaolana. […] Nanjary niantehitra tsikelikely tamin'ny pejy voatsidika ho an'ny fidiram-bola amin'ny dokambarotra ny sehatry ny media nomerika. […] Mba hampiroboroboana ny fitsidihana ny pejy, ampiasaina hanangonam-baovao […] ny paikady miankina amin'ny fialamboly, lohateny mahafinaritra, pôrnôgrafia ankoatra ny hafa. Maneho ny ankafizin'ny maro ny fahombiazan'ny Most100[…]
Raha hala tahaka manesoeso avy amin'ireo lohahevitra mafàna mikasika ny toe-draharaha ankehitriny ny votoatin'ny Most100, mahita miandalana ny Most100 ho vaovao fanampiny sy mandray ny votoaty ho vaovao ny vahoaka […] Tsy fampandrosoana tsara ho an'ny asa fanaovan-gazety izany.
Lam Yin Bong, mpiasan'ny fampahalalam-baovao iray, nilaza tao amin'ny Stand News, fampahalalam-baovao tsy mitady tombontsoa, fa tsy tokony hanafangaro ny fandraharahana amin'ny famokarana fampahalalam-baovao amin'ny asa fanaovan-gazety ny olona:
Afaka milaza isika fa tsy nahita ny lalany ny fampahalalam-baovao. Tsy midika izany fa ny fahombiazan'ny Most100 dia zavatra azo na tokony hianaran'ny fampahalalam-baovao.
Voalohany indrindra, nanatsotra sy nanome endrika mahatalanjona ny vaovao ny Most100 (sy ny sehatra hafa mitovy amin'izany). Afaka mandray ny parôdia ho fialam-boly isika saingy tsy tokony handray izany ho loharanom-baovao. Faharoa, ny paikadiny ara-barotra amin'ny fanangaroana ny vaovaon'ny hafa ho vaovao dia mifanohitra amin'ny fampahalalam-baovao mampiseho ny tenany ho mpanaramaso ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fikarohana loharanom-baovao voalohany. Fahatelo, amin'ny maha tranainy, tsy azoko an-tsaina mihitsy ny fampahalalam-baovao mandray andraikitra hanampy ireo orinasa hampivelatra hevitra amin'ny fivarotana ny vokatr'izy ireo.